fanontaniana fiaramanidina tahirin-kevitra
2 taona 1 volana lasa izay #255 by Dariussssss
Te-hanontany, Manantena olona dia mahafantatra fa ...
Rehetra toerana misy anao, ary maro payware fiaramanidina manana be dia be ny tahirin-kevitra, toy ny maso lisitra, momba haingana sy ny sisa. Miezaka aho nandritra ny volana maro mba hahita izany ho an'ny Thomas Ruth A330 / 340, sy ny maro hafa koa fiaramanidina, nefa mbola na inona na inona. Noho izany, na iza na iza no mahalala hoe aiza no ahitana azy io?
2 taona 1 volana lasa izay - 2 taona 1 volana lasa izay #256 by Gh0stRider203
Eny, Matetika aho no mampiasa Wikipedia for Cruise hafainganan'ny / Altitude.
Manantena aho dia manampy ny sisa ..
KOA hanamarina izay lazain'i ho an'ny Max FSX solika / lehibe-lanjan'ny an'i Wikipedia, tahaka ny inona no eo amin'ny misy mitady ny ho marina. RAHA FSX Tsy mitovy izany tena mora vahaolana
Fanovana farany: 2 taona 1 volana lasa izay by Gh0stRider203.
2 taona 1 volana lasa izay #257 by Dariussssss
Ny tena olana sy ny fanaintainana ao amin'ny ..... dia izao: rehefa manidina, rehefa manatona ny vne, na ny fihinanam-bilona haingana, ny IAS mena mahazo kasety. Tsy amin'ny TR A330 / 340. Noho izany, dia tsy Vakio ny toerana amin'ny fihinanam-bilona hafainganam-pandehan'ny zavatra, hany azoko atao dia maminavina. Ny lisitra dia tena tsy manome ny vaovao, tsy misy na iray hitako.
Afaka mihady ny CLS A340 Docs ... fa mafy hisalasala izany no mitovy amin'ny TR A340.
2 taona 1 volana lasa izay - 2 taona 1 volana lasa izay #258 by Gh0stRider203
tsara marina ... handeha araka izay afaka mahita ny tena vorona .....
toy ny ao amin'ny 747 (na iza), dia mirona hanao 245 ambany 10K amin'ny climb-nivoaka, dia napetrany autothrottle ny na inona na inona ny Cruise hafainganam-pandehan'ny any IAS, farany fomba mora aho mba hatao amin'ny 135 ias
amin'ny fihinanam-bilona hafainganam-pandeha no tena mora ny mahita avy! fa ao amin'ny aircraft.cfg rakitra
2 taona 1 volana lasa izay #259 by Dariussssss
Hita izany .... saingy tsy fomba izany no marina.
Full mikopaka fihinanam-bilona hafainganam-pandeha-120 kts ho Airbus a340-500?
2 taona 1 volana lasa izay #260 by Gh0stRider203
2 taona 1 volana lasa izay #261 by Gh0stRider203
fa lava tifitra, fa fantatrao izay ... ANDRAMO fahazoana mihazona ny Airbus ... jereo raha Ho hanampy anareo hiala!
2 taona 2 herinandro lasa izay #306 by Dariussssss
Taorian'ny fikarohana manodidina ny You Tube, aho, dia afaka hahafantatra zavatra sasany ..
A340-600, manatona haingana 160-170 kts, miaraka amin'ny fihinanam-bilona hafainganam-pandeha ho ambany fotsiny 160 kts, izay lehibe iray woow .... Tsy mahagaga toy izany aho dia nanana fotoana sarotra an-tanety izany zavatra izany. Kely A340s ... ny Vina tsara indrindra, 5-10 kts ambany hafainganam-pandeha, fa mbola tena fifadian-kanina.
Moa ve misy manana Info bebe kokoa momba izany?
2 taona 2 herinandro lasa izay #308 by Colonelwing
Description: A340-500,600 mahasakana avy FCOM
2 taona 2 herinandro lasa izay #312 by Dariussssss
Misaotra be dia be ny olona. Dia tsy afaka haka azy avy ny toerana, tsy mba handeha aho mba handoavana izany. Nefa, afaka aho nihady azy-toeran-kafa. Na izany aza, iray lehibe, lehibe fisaorana. Dia tsy fantany rakitra ity amin'ny rehetra.
Fotoana mamorona pejy: 0.303 segondra